कुलमानलाई देश नि’का’ला गरौं ! पहिले पूरा पढनुहाेस। – Sidha Post 24
कुलमानलाई देश नि’का’ला गरौं ! पहिले पूरा पढनुहाेस।
राजेन्द्र वानियांं एक समय देशमै बसेर यहाँको शिक्षाको बिकासमा योगदान गर्छु भनेर डा श्रीरामभक्त माथेमा कम्बोडियाबाट नेपाल आउनुभयो । केही बर्ष काठमाडौमा बसेर केही शैक्षिक संस्थामा काम पनि गर्नुभयो,अन्तत केही बर्ष अघि उहाँको चित्तदुख्दो अनि निराशाजनक अभिव्यक्ति आयो -” म हारेँ,काम गर्ने कुनै सकारात्मक बाताबरण भएन । म त्यसैले गह्रौ मन लिएर कम्बोडिया फर्कँदैछु ।
कुलमानका बिसयमा अहिले एकपछी अर्का जलमाफिया राजनितिक व्यापारी कम्मर कसेर लागेका छन् । यो मामिलामा सरकारमा बस्ने कतिले निर्लज्जताको पराकाष्ठा नाघेका छन् । नेता र मन्त्री हुनु भनेको झुट बोल्ने लाइसेन्स पाउनु हो भने ठिकै छ हैन भने उर्जामन्त्रीले जनताका अघि सफेद झुट बोलेका छन् । मेरो जनतालाई चेतावनी छ- कहिलेसम्म बिबेक बन्दकी राखेर राजनितिक ब्यापारीलाई जनप्रतिनिधिको रुपमा जिताउँछौ हँ ? मन्त्रालयको तर्फबाट कुलमानको प्रस्ताव लैजान्छु भनेर मेरै कार्यक्रममा जनताकाबिच बोलेका र प्रतिबद्धता गरेका उर्जामन्त्री बर्षमान पुनले जनतालाई झुटो बोले बापत राजिनामा दिन पर्दैन ?
कि प्रधानमन्त्रीले पुनको प्रस्ताब रोकेको हो भने जनतालाई प्रष्ट भन्नुपर्यो,हिसाब त्यतै मागौँला । कि लेनदेन नमिलेको ? कुलमानले गत चुनावमा चुनाब खर्च दिएनन् हो? पार्टी र नेता पाल्ने माफिया,बिचौलिया र इन्भर्टर ब्यापारीकै प्रभाबमा कानुनको अड्चन निकालेको भए यसको मूल्य महङ्गो पर्नेछ ,ढुक्क भए हुन्छ । अहिले सत्तामा बस्दा हामीलाई कस्ले के गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ । यस्तै सोच्थे सद्दाम हुसेन,पर्भेज मुसरफ अनि हिटलर पनि । उनीहरुको नियती पढेको भए ठिकै छ,नत्र एकपल्ट पढेर ती मध्ये कसको नियती प्यारो छ,चिठ्ठा थु’त्दा भैगो ।
हैन कुलमानले गरेका राम्रा कामले पोलेकै हो र ?उनकै कारण आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्न गार्‍हो भएको नै हो भने कुलमान घिसीङलाई देश निकाला गरौं । बत्ती दिन र जनतालाई उज्यालो दिनु उनको गल्ती थियो भने कानुन बनाएर मृत्युदण्ड दिँदा नि भयो । न रहे बाँस न बजे बाँसुरी । चर्चित पत्रकार राजेन्द्र बानियाको फेसबुक वालबाट